माइक्रोसफ्ट IE7 मा ActiveX समस्याका बाइपास लागि विकल्पहरू प्रस्ताव गरेको छ
माइक्रोसफ्ट IE7 मा ActiveX समस्याका बाइपास लागि विकल्पहरू प्रस्ताव गरेको छ
यस्ता साइटहरू, हजारौं लागि सिम्यानटेकद्वारा डाटा। साँचो, तिनीहरूले ज्यादातर चीन र अन्य एसियाली देशहरूमा छन्। यो समस्याका प्रयोग गरेर एक सफल आक्रमणको फलस्वरूप, यस आक्रमणकारीले कम्प्युटर पूर्ण नियन्त्रण कमाइहाले। त्यो त कार्यक्रम स्थापना गर्न सकेन; हेर्नुहोस्, परिवर्तन, वा डाटा मेटाउन र प्रशासनिक विशेषाधिकार, आदि संग नयाँ खाता सिर्जना तर, माईक्रोसफ्ट अनुसार, जोखिममा कम्तिमा प्रशासक खाता अन्तर्गत काम नगर्ने मानिसहरू हुन्।
कुन कम्प्युटर यो खतरा उजागर गर्दै छन्? नम्बर 972 890 अन्तर्गत Microsoft नलेज बेस मा आलेख, विन्डोज सर्भर 2003 चलिरहेको सबै कम्प्युटर को खतरा विषय अनुसार, Windows XP SP2, Windows XP SP3 र Windows XP 64 ब्राउजर अझै पनि IE8 परिवर्तन गरिएको छैन। एकै समयमा IE8 यो खतरा उजागर छैन, किनभने DirectShow ActiveX कोड तोड गर्न प्रयोग गरिएको छ कि, यो काटिएको थियो। र, तपाईं अझै पनि IE7 संग काम वा छन् भने (दम तोड!) IE6 को संग?
माइक्रोसफ्ट अझै जारी भएको छैन यो खतरा फिक्स भन्ने तथ्यलाई बावजुद, कम्पनी भनेर तपाईं आफ्नो कम्प्युटर सुरक्षा गर्न अनुमति दिन्छ वैकल्पिक समाधान प्रस्ताव गरेको छ। यसलाई प्रयोग गर्न, तपाईँले नलेज बेस 972 890, डाउनलोड भ्रमण र समाधान आफैलाई माइक्रोसफ्ट यो 50287. ठीक यस्तै मा, तपाईं यसलाई फर्कन सक्नुहुन्छ चलाउन पर्छ। यो हटफिक्स पनि सुझाव लागू Windows Vista र Windows सर्भर 2008 कि ​​IE7 प्रयोग गर्नुहोस्। को प्रयोगकर्ता
वास्तवमा, तपाईं आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ र स्वयं, तर यो रजिस्ट्री सम्पादन हुनेछ। यसबाहेक, कम्पनी यो सिफारिस र यो परिणाम ग्यारेन्टी छैन भन्छन् गर्दैन। तर, यो रजिस्ट्रीमा सम्पादन रक्षा गर्न चाहने, सबै आवश्यक जानकारी यहाँ पाउनुहुनेछ।
उपकरण प्रबन्धक प्रयोग |​​ विन्डोज को विश्वकोश
एप्पल iOS5बिटा 6
गुणस्तरीय रस्सा सेवाहरू